रूसी भूमि धनी बहुमूल्य औषधीय बिरुवाहरु। तिनीहरूमध्ये एक विशेष स्थान Asteraceae परिवारको सिमसार cudweed, कहिलेकाहीं भनिन्छ दलदल (Gnaphalium uliginosum) कब्जा गरिएको छ। यो प्रसिद्ध फ्लिया जडिबुटी के हो र यो उपचार रोगहरु केले मदत गर्न सक्छ? यो यस लेखमा छलफल गरिनेछ।
Herbaceous वार्षिक बोट छोटो (30 सेमी) छ आधार-प्रसार र branching लेपित चाँदी-सेतो देखि स्टेम "लाग्यो।" छोटो मूल, स्टेम, राम्रो स्लिम। पात, साना नियमित छन्। तल तिनीहरूले संकुचित, घनी pubescent।
फूल हल्का पहेंलो रंग शाखा को अन्त्य मा सानो बास्केट, बन्डलहरूको वा राखिएको बाक्लो टाउको मा संकलित छन्। माथिल्लो पात diverging रेज जस्तै तिनीहरूलाई सरसंगत। फल - oblong आकारको हल्का खैरो वा greenish-खैरो achene एक tuft संग।
Cudweed, जसको गुण (औषधीय) लामो अगस्ट गर्न मिड-जुन देखि चिकित्सकहरु, blooms उल्लेख गरेका छन्। फल अक्टोबर मा पकाना। को बोट मात्र बीउ द्वारा reproduces। एक झाडी मा पाँच वर्ष को लागि स्वयंसमर्थता राख्ने भनेर पाँच सय बीउ सम्म जम्मा गर्न सक्छ।
घाँस cudweed सिमसार पूर्व मा जापान र कोरिया पश्चिम मा ग्रेट ब्रिटेन, पोर्चुगल, आइसल्याण्ड बाट, यूरेशिया को समशीतोष्ण र चिसो क्षेत्रहरु मा पाइन्छ। यो सुदूर पूर्व, काकेशस मा, पूर्व सोभियत संघ, पूर्वी र पश्चिमी साइबेरिया इलाका विस्तार। fallow र Meadows, नदी र पोखरी को दलदली बैंकहरू, floodplain वन रुचि। यो waterlogged माटो र आलु क्षेत्रहरू संग उद्यान भेटिए।
सिमसार cudweed पोषक धेरै छन्। तिनीहरूमध्ये:
आवश्यक तेल (0.05%);
निशान alkaloids (gnafalin);
भिटामिन बी 1 र K;
योगों uliginose astringent र विरोधी भडकाऊ, घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने गुण अधिकार। तिनीहरूले पुनर्जनन, मर्मत र epithelialization र छाला र mucosal सतह ulcerative घाउ को प्रक्रिया गति गर्न सक्षम छन्। यो अध्ययन गर्ने बिरूवा को antihypertensive र vasodilator गुण प्रकट गर्नुभयो। flavonoids सँग सम्बन्धित hypotensive प्रभाव।
धेरै लागूऔषधको आधारमा तल हृदय contractions को ताल धीमा र बेहोशि औषधि प्रभाव छ cudweed। र यसको संरचना (flavonoids, रेजिन, समावेश छन् जो अन्य पदार्थ - (रोग प्रक्रियाहरू मा immunobiological गुण बढ्छ जो carotene, provitamin एक) कारण भिटामिन को प्रभाव गर्न बिरूवा को चिकित्सकीय प्रभाव टेन्निसको)।
परम्परागत चिकित्सा को प्रयोग
मिति, राम्रो Cudweed अध्ययन। बोट र contraindications को औषधीय गुण सबै परम्परागत चिकित्सकहरु लागि परिचित छन्। यो मात्र होइन राष्ट्रिय तर पनि परम्परागत चिकित्सा प्रयोग गरिन्छ। नियम, यो बोट को आधारमा तयारी एक रूपमा विरामीहरु दिइएको छ hypotensive एजेन्ट, हृदय दर धीमा को बस एक बिट, तर पनि circulatory प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव छैन।
cudweed देखि तेल निकासी कणांकुरण उत्तेजित। तिनीहरूले बल्न कारण क्षतिग्रस्त छाला को पुनर्जनन लागि निर्धारित छन्। धाप cudweed peptic अल्सर र आंतों gastritis को उपचार को लागि medicaments को निर्माण मा अनुप्रयोग पाइएन।
cudweed लागूपदार्थ को स्नायु प्रणाली को गम्भीर रोगहरु को जटिल उपचार को भाग हो। आज यो राम्रो उच्च रक्तचाप को प्रारम्भिक चरणमा को उपचार को लागि, cudweed बनाइएका औषधिहरू सिद्ध छ।
लोक चिकित्सा को प्रयोग
परम्परागत चिकित्सकहरु एक लामो समय को लागि यो बोट लाभकारी गुण प्रयोग गर्नुहोस्, र म धेरै राम्रो, भन्न पर्छ। Decoctions र infusions पाचन पर्चा को अल्सर, माइग्रेन, एनजाइना, रक्त नली, बवासीर, uterine, मृगौला रक्तस्राव को spasm लागि सिफारिश छन्।
Decoctions र तेल-रक्सी अर्क लोशन को रूप मा बाह्य प्रयोग गरिन्छ, घाउ, बल्न र अल्सर festering को उपचार को लागि compresses। सिमसार ग्रीवा क्षरण, Trichomonas vaginitis को उपचार प्रभावकारी छन् जो विभिन्न शुल्क भाग cudweed।
जलसेक (ट्रे) को Palms र खुट्टा को अत्यधिक डराएको मा राम्रो परिणाम दिन्छ। हामी तपाईंलाई लागूऔषधको तयारी केही विधिहरू थाह प्राप्त गर्न प्रस्ताव।
दस ग्राम तातो पानी उम्लिरहेको को enamelware कप भर्न cudweed। एक ढक्कन संग पैन बन्द र पन्ध्र मिनेट को लागि एक पानी स्नान मा राखे। को तैयार त्यसपछि कोठा तापमान, फिल्टर, प्रेस फिड गर्न सुन्दर छ। मूल उसिनेर पानी ल्याउन तरल पदार्थ को परिणामस्वरूप मात्रा।
एक गाढा सुन्दर छैन दुई दिन भन्दा स्थानमा भण्डारण गरिएका जिद्दी। एक दिन दुई पटक एक antihypertensive र विरोधी भडकाऊ एजेन्ट रूपमा आधा कप लिन।
सुक्खा घाँस बीस ग्राम पानी उम्लिरहेको 300 एमएल खन्याउन र पाँच मिनेट को लागि कम गर्मी मा राखे, लगभग दुई घण्टा खडा गर्न अनुमति दिन्छ। कि पछि, संरचना तनाव हुन र साथै लिन जलसेक रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं कच्चा माल को छ ग्राम (स्लाइड संग तालिका चम्चा) आवश्यक हुनेछ। यसको दैनिक, त्यसपछि फिल्टर मिलान, कुनै पनि वनस्पति तेल (प्राथमिकताको जैतून), दस दिनको लागि infused को 200 एमएल खन्याउन।
अन्य क्षेत्रमा बिरुवाहरु को प्रयोग
सिमसार इथेनल-तेल निकाल्ने को उत्पादन को लागि प्रयोग cudweed। उहाँले सफलतापूर्वक पशु चिकित्सा प्रयोग गरिएको छ।
संकलन र तयारी
फूल बिरुवाहरु को अवधिमा उत्पादन कच्चा माल को खरीद। भेला गर्दा प्रति वर्ग मीटर thickets 2-3 बिरुवाहरु गति लागि बायाँ गर्नुपर्छ। को बिरुवाहरु, को जरा माथि dug छन् आफ्नो भूमि बन्द मिलाउ र बन्द छाया मा सुकेको मूल, खुला हावा, एक दिन धेरै पटक खोल्दै काटन।
खराब मौसम मा, कच्चा माल एक चदंवा अन्तर्गत सुकेको गर्न सकिन्छ, एक विशेष सुकाउने कोठामा (तापमान +40 ° C), attics। संयंत्र तीन वर्ष भित्र सुक्खा अवस्थामा यसको औषधीय गुण पनि कायम रहन्छ।
यो जडिबुटी र यसको आधारमा सबै तयारी यसको संरचना मा hypersensitive र असहिष्णु व्यक्तिगत घटक संग मान्छे को लागि contraindicated छन्।
कडाई कम रक्तचाप भोगिरहेका विरामीहरु यी लागूऔषधको स्वागत निषेधित। सामान्यतया, यो बोट साइड इफेक्ट कारण छैन, तर एलर्जी प्रतिक्रिया प्रकट हुन सक्छ। यस मामला मा, दबाइ तुरुन्तै समाप्त भएको छ।
सिमसार प्रयोग मात्र आफ्नो डाक्टर परामर्श पछि cudweed। पनि अक्सर आत्म धेरै गरिब परिणाम निम्त्याउँछ।
भारतीय प्याज: औषधीय गुण, tincture। लोक चिकित्सा मा भारतीय प्याज
घरमा एन्टिना कसरी उपचार गर्ने? विभिन्न प्रकारको रोगको उपचार
जंगली yam प्रार्य गठन। परम्परागत चिकित्सा को प्रयोग
Sinusitis। लोक उपचार को उपचार
उपयोगी गुण र आवेदन Salvia Officinalis
Logistician: कर्तव्य र विशेष पेशा
बोट र ब्रियान्स्क क्षेत्र को लाल बुक को जनावर: फोटो सूची
स्प्रिन्ट दौड: हावा संग एक जाति
प्राचीन भारत प्राचीन धर्म (छोटकरीमा)
स्वतन्त्रता - यो छ ... आत्म-रिलायन्स के हो र कसरी यो बच्चाहरु र किशोरों विकास गर्न?
वंशाणुगत प्रसारण: अवधारणा र उत्तराधिकार को सही